Apple wuxuu sawirayaa oo shatiyada u siinayaa adduunyo ay ka buuxdo AirTags | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu sawiraa oo shatiyadiisa adduun ka buuxo AirTags
Manuel Alonso | | dhowr
Sida laga soo xigtay Prosser AirTags waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhacdo cusub oo Apple ah taas Waxay dhici doontaa 16-ka Maarso, 2021. Ilaa iyo waqtigaas, injineerada Apple waxay saadaalinayaan adduun cusub oo dadku ay ku heli karaan walxo aan dhammaad lahayn iyo qalabka guryaha ee magaalooyinka, iyo waxyaabo kale, oo leh calaamadahan cusub. Shatiyada shirkad cusub ayaa markhaati ka ah tan: adduun ka buuxo AirTags.
Caadi ahaan, shirkadaha sida midka Mareykanka, waxay badanaa ka diiwaan geliyaan rukhsado badan fikradaha qaarkood ee soo baxay. Taas macnaheedu maaha inay run noqonayaan ama in iib la geyn doono. Had iyo jeer, fasal ka mid ah waxa loogu yeero "master" shatiyada. Taasi waa, fikradaha guud ee ku saabsan mowduuc gaar ah. Munaasabaddan, waxay ahayd marki ay ahayd AirTags iyo howlaha ay qaban karaan.
Shaqada ugu weyn ee AirTags waa, dabcan, inay gacan ka geysato raadinta iyo helitaanka waxyaabaha qiimaha leh sida boorsooyinka, furayaasha, AirPodsStudio, iwm Hal warbixin ayaa soo jeedisay taas Apple waxay qorsheyneysaa inay ku sii deyso laba cabbir oo kala duwan. Noocyada yaryar ayaa si fudud ugu jiri kara boorsada jeebka, furayaasha ... iwm. Kuwa waaweyni waxay ku habboonaan lahaayeen waxyaabaha sida bacaha, kamaradaha, shandadaha.
1 Qeybtii ugu horreysay ee shatiyada adduunka oo ay ka buuxdo AirTags: Guryaheenna iyo nafteenna
2 Kooxda labaad ee shatiyadaha sayniska: Qalabka gurmadka iyo madadaalada
Qeybtii ugu horreysay ee shatiyada adduunka oo ay ka buuxdo AirTags: Guryaheenna iyo nafteenna
Sharciyada la soo bandhigay ayaa sheegaya in aaladaha go'an sida HomePods (mini), sidoo kale waa lagu calaamadeyn karaa. Haddii aad ilowday meeshii aad wax ku dhigan lahayd guriga, tusaale ahaan shandado ama shandad, dhammaan qalabka gurigaaga ayaa kaa caawin kara saddex-xagalista booska calaamaddu. Sidoo kale, haddii aad si lama filaan ah u ogaato inaadan haysan wax la mid ah sameecadahaaga, qalabka guriga ayaa ku siin kara xasillooni maskaxeed iyagoo ku ogeysiinaya inay ku nabad qabaan guriga.
Sawir ayaa soo jeedinaya inaan u adeegsan karno AirTags dadka si loo helo. Waxay soo bandhigaysaa astaamo jijin ah oo laga yaabo in loo isticmaalo carruurta aad u yar si ay u yeeshaan Apple Watch ama iPhone. Si isku mid ah ayaan u arki karnay in nidaamka meeqaamkiisu aad u sareeyo uu awood u siiyay kooxda ballaadhan ee ballaadhan, laguna dari karo xawaareyaasha si ay ugu oggolaadaan AirTags inay ogaadaan markaad dhacayso, iyagoo kaa caawinaya inaad saxdo booskaaga.
Kooxda labaad ee shatiyadaha sayniska: Qalabka gurmadka iyo madadaalada
Fikrad xiiso leh ayaa ah in la waafajiyo AirTags kooxaha gurmadka, sida qalabka wax lagu karsado iyo dab-bakhtiiyeyaasha. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in iPhone ama Apple Watch ay kuu tilmaamaan midka kuugu dhow markii loo baahdo. Markii aan qatar ku jirin oo aan ku jirnay aaga raaxada aan ku ciyaareynay qolkeena fadhiga, waxaan u adeegsan karnaa AirTags si aan u xakameyno boosaska, dhaq dhaqaaqyada iyo dhaq dhaqaaqa avatarkaaga ciyaar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple wuxuu sawiraa oo shatiyadiisa adduun ka buuxo AirTags
Sony waxay ka dambeysaa shaashadaha muraayadaha dhabta ah ee Apple
Falanqaynta Teknolojiyada Safari 115 hadda waa la heli karaa